Canonical's Mir Kuuya kuFedora (uye Zvimwe Zvikamu) | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe huwandu hwakawanda hwekugovera huri kubheja paWayland, chokwadi ndechekuti dzimwe nzira dzakadai saMir dzinoramba dzichikura. mabvazuva Canonical's graphical server ichiri kurarama uye vazhinji vari kuyedza kutora zvese zvavaida kuti vasvike paMIR graphic server.
Rimwe remabasa aya kutaurirana nemamwe maseva emifananidzo, chimwe chinhu chakatozadzikiswa uye ikozvino, tarisiro iri pakuita kuti Mir iwanikwe kune kumwe kugovera.
Developer Alan Griffiths aratidzira kuti ari kushanda kugadzira Mir kuti ishandiswe muFedora, kuve imwe nzira kune Wayland neXorg. Izvi zvinotora nguva kuti zviitike uye parizvino basa riri kuitwa paFedora, asi chinangwa cheboka reMir ndechekuti Mir iripo mune zvisiri zveUbuntu kana zvisiri zveUbuntu zvakagoverwa.
Fedora ichave iri yekutanga kugoverwa kuve neMIR kunze kweUbuntu
Pamwe nebasa iri, mazhinji ematafura anoda kuti izvi zviitike, kusanganisira Kubatana 8, Yunit uye MATE, desktops vakaratidza chishuwo chekushanda neiyi graphical server, kunyangwe iine Xorg uye neXWayland vanoshanda zvakakwana.
Zvinotarisirwa kuti paMir vhezheni 0.28.1 izvi zvichawanikwa, asi hachisi chinhu chine chokwadi kana zvirinyore kuita. Chero zvazvingava icho chinangwa icho chinokurumidza kana kuti chinotevera chichawanikwa uye nacho chinosimudza mamiriro matsva evakagadziri, ematafura, ekugovera uye pasina kupokana neCanonical pachayo.
Ini pachangu, ini handisarudze chero eaya mapurojekiti, asi zvinoshamisira kuti apo Canonical paakafunga kuumba Mir nekuti Wayland yanga isiri kuenda kumberi, vazhinji vakatanga kutsigira Wayland uye izvozvi Wayland ndiyo budiriro izere, vazhinji vanosarudza Mir . Kunyangwe chimwe chirongwa chisina chekuita nechimwe, chiri kungoda kuziva Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Canonical's Mir iri kuuya kuFedora (uye kumwe kugovera)
Ini handisi chirongwa chinoshamisira, kana Wayland, kana chero chinhu chakadai, asi chandisingafarire nezve Mir ndechekuti vakasarudza C ++ senzvimbo yavo yekuronga. Pasina kupinda mukukurukurirana, ndichishandisa chinhu chinoronga nharaunda padanho rakaderera kudaro handione chero chinhu chakakodzera, ndinofunga chinhu chakakodzera kungave kushandisa yakachena C, isina zvimwe, yaizodzivirira mukana wezvakakundikana izvo zvinhu uye ingachengetedza zviwanikwa. Ini ndinofunga OOP yenzvimbo dzakakwirira-nharaunda.